बयालपाटा अस्पतालमा घटेको घटनाको दोषी को ? « Media for all across the globe
बयालपाटा अस्पतालमा घटेको घटनाको दोषी को ?
सर्वप्रथम त हिजो एकजना भाइ ले आफ्नो रोजगारी गुमेको पिडाले ज्यान गुमाएका छन । यो निकै दुखद कुरा हो । समस्याको समाधान मृत्यु त कदापि होइन, उनले चाहे कसैको उक्साहटमा होस या कसैलाइ धम्क्याउन अपरिपक्व युवा चेतनामा होस, वा आफ्नो पिडा थाम्न सकेनन ज्यान गुमाए यसमा दुखि छुँ । भाइको मृत आत्माले शान्ति पाओस भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली ब्यक्त गर्न चाहन्छु । साथै पिडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यववस्था गरियोस भन्ने माग पनि गर्न चाहन्छु । अर्को कुरा भाइले जुन गलत बाटो रोजे त्यो गर्न नहुने थियो । उनले आफ्नो जीवन त गुमाए घरपरिवारलाइ मात्र हैन बाँकिलाइ पनि समस्यामा पारेर गए । यो गंभिर समस्या पनि हो ! अब यसको जिम्मेवार कसलाई ठान्ने प्रश्न यहाँ छ ! हुन त हामी धेरै टाढा–टाढा बाट नियाल्दै छौ, र हाम्रो चाहाना कुनै पनि व्यक्तिको रोजगारी गुम्नु हुदैन र वेरोजगारीको पिडाले ज्यान गुमाउनु हुँदैन भन्ने पनि हो । हामी जो जहाँ भएपनि आफ्नो जन्मभुमी बारे चिन्ता भने सबैलाइ हुन्छ !
– भुल सामाजिक अभियन्ता हुन्।